Kwuru ikike maka Nero 2015 Platinum | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-akpọpụ ikike nke Nero 2015 Platinum
Maka onye kasị ochie nke ebe ahụ, n'ezie Jirila sọftụwia Nero mee ka ọkụ CD na DVD ghara ịdị agwụ agwụ Mgbe ojiji nke ụdị dijitalụ nchekwa bụ nanị ihe ngwọta na-enwe ike efu ohere na draịvụ ike anyị, ma ọ bụrụ na fim, music, ngwa, akwụkwọ ... Ma n'ihi na a mgbe ugbu a, na na dobe na ahịa nke ike draịva ọtụtụ ndị ọrụ kwụsịrị iji CD na DVD mgbe niile maka ịkekọrịta faịlụ na ịchekwaa, ọkachasị n'ihi ohere pere mpe.
Maka akụkụ ya Nero, amatala otu esi emegharị maka mgbanwe nke usoro ndị ọrụ ma na-emelite ngwanrọ ya nke mere na ọ bụghị naanị iji ya na-edekọ CD na DVD, mana ugbu a, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla nke ikiri, ntụgharị, mmeputakwa, nzukọ, yana iji dakọtara na ekwentị ndị jupụtara na ahịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Nero 2015 Platinum bụ sọftụwia nke anyị na - agakwaghị eji ma chọọ ngwa ndị ọzọ iji rụọ ọrụ mgbe niile dịka ịkewapụta onyonyo anyị, ịtụgharị vidiyo, ịmepụta listi ọkpụkpọ…. eme ihe niile bụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
1 Nyefee: nweta ikikere Nero 2015 Platinum n'efu
2 Nero 2015 Platinum Atụmatụ
Nyefee: nweta ikikere Nero 2015 Platinum n'efu
Iji nwee ike isonye na asọmpi ahụ wee merie ikike ikikere Nero 2015 Platinum nke anyị na-asọpụrụ n'etiti ụmụazụ anyị niile na nke ahụ bara uru na euro 99, dị nnọọ ị ga-arụ usoro ndị a:
1 - Soro Vinagre Asesino na Twitter
2 - Zipu tweet ndị a na-eji akaụntụ njirimara gị:
Ihe osise a ga-ejedebe na July 15, 2015 na 14: 00 pm (oge peninsular Spanish). N'otu ụbọchị ahụ, anyị ga-ekwupụta aha onye mmeri. Ya gaziere onye obula!
Emelitere- The raffle akwụsịla ugbu a na onye mmeri nke otu akwụkwọ Nero 2015 Platinum bụ @ 12plc. Ana m ekele gị nke ukwuu maka onye ọ bụla na-ekere òkè ma na-ege ntị na Vinagre Asesino maka ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Nero 2015 Platinum Atụmatụ
Kpọọ vidiyo na ngwaọrụ iOS na gam akporo ọ bụla ekele nhọrọ Gwuo na ebe anyị ga-ahọrọ nke ngwaọrụ anyị chọrọ mụta nwa ọdịnaya nke echekwara na kọmputa anyị.
Dekọọ faịlụ ozugbo si iOS na gam akporo ngwaọrụ na Nero AirBurn. Naanị anyị ga-ahọrọ foto na vidiyo anyị chọrọ ịchekwa na Smartphone ma ọ bụ mbadamba anyị wee zipụ ha ozugbo na ngwa a ga-edekọ.
Kpido, chọọ foto na vidiyo site na itinye geotags. Ekwesiri ighota na uzo kacha mfe ichota foto bu site na geolocation nke otutu ngwaọrụ tinyere na ndabara, ma obughi igwefoto dijitalụ. Site na Nero 2015 Platinum, anyị nwere ike tinye mkpado geolocation na onyonyo anyị iji mee ka ọ dị mfe ịchọta ma ọ bụ mepụta ngosi ma ọ bụ ncheta mmụọ mgbe anyị gara ebe ahụ.
Ọ nwere ihe eji egwu egwu ohuru nke na-enye anyị ohere ịnweta ngwa niile dị na ngwugwu site na windo otu. Site na ngwa nfe a dị mfe anyị ga-enweta ọrụ niile nke ụdị ọgbara ọhụrụ a n'eleghị anya na ịnweghị ịnyagharị n'etiti menu nke kọmputa anyị.
Gbanwee usoro nke vidiyo diski mgbe ị na-eke ihe. Anyị adịghị mkpa ịmepụta ọrụ ọhụrụ iji nwee ike ịgbanwe usoro mmepụta nke anyị ga-ahọrọ na ngwa ahụ mgbe anyị malitere ịmepụta vidiyo, akụkụ nke anyị na-enweghị ike ịgbanwe n'ọtụtụ ngwa vidiyo.
Anyị nwere ike itinye ụdị akụkọ akụkọ cinematic ma mepụta mmetụta ederede na-akpali akpali maka vidiyo anyị. Anyị nwere ụdị 20 ahazi ụzọ ị ga-agbakwunye ma hazie ihe okike anyị.
Nweta uzo igwe ojii Nero nke anyị ga-esi enweta egwu anyị, foto na vidiyo anyị nwere na nchekwa Nero BackitUp Cloud. Na Nero MediaHome anyị nwere ike ijikwa ihe niile anyị chọrọ ịchekwa n'igwe ojii n'agbanyeghị ọdịnaya.
Cinco ọhụrụ mobile ngwa iji ma nweta ọtụtụ n'ime Nero 2015.
Ohere nke kpọọ ọdịnaya na TV ọ bụla ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ egwu na akpaka transcoders. Na mgbakwunye na ikwe ka anyị jikwaa data anyị na-echekwa na igwe ojii, Nero MediaHome na-enyekwa anyị ohere iji ya dị ka ebe ntanetị ọtụtụ iji kpọọ ọdịnaya site na telivishọn anyị ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi.
Dekọọ ma gbanwee vidiyo dị ngwa ngwa karịa na nsụgharị ndị gara aga. Ekele maka ọrụ SmartEncoding emelitere nke na-enye nhazi ngwa ngwa nke na-enye anyị ohere ịme ndekọ na obere oge. Anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ngwanrọ ngwanrọ dị elu maka mbupụ AVC iji tọghata vidiyo ọbụlagodi ọsọ ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Anyị na-akpọpụ ikike nke Nero 2015 Platinum
Anyị nọ na July 20 ma ahụbeghị m na e bipụtara onye mmeri
Zaghachi Vicente Talens Zúñiga
Ndewo Vicente, aha onye mmeri bụ nke ebipụtara na post. Rịba ama na anyị ejirila aha Twitter nke mmeri merie isiokwu ahụ. Echiche kacha mma!
Sense, eze nkpu
Anyị nwalere HTC One M9, nnwale ọhụrụ nke HTC na njedebe dị elu